Uhlangothi Namakhasimende Akho | Martech Zone
Eceleni Namakhasimende Akho
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 18, i-2009 ULwesibili, May 6, 2014 U-Travis Smith
Abasebenza nge-Old-School switchchboard
Ocingweni lwakamuva lwenkampani enkulu yezokuxhumana, engingeke ngiyisho (i-logo yabo ibukeka njengenkanyezi yokufa eluhlaza okwesibhakabhaka),
Ngathatheka ngummeli wami wamakhasimende? kuyashaqisa, ngiyazi.
Kuwo wonke amakholi empeleni wabala engikufunayo, futhi washo izinto ezinjengokuthi, “lesi yisivumelwano iningi laso amakhasimende ami uthanda ", futhi" ake ngikhulume nomphathi ukuze ngithole us isivumelwano esingcono ”, futhi“ Ngiyakuqonda ukukhungatheka kwakho, angazi ukuthi kungani they yenza lokho ”. Kungenzeka kungabonakali ekuqaleni, kepha ubekhuluma sengathi ungakimi. Ngizwe sengathi nginomuntu (wo) ngaphakathi, imvukuzane, umngani ongene ngokujulile emnyangweni wezinsizakalo zamakhasimende ngilinde ucingo lwami ukuqedela umphathi wethu.
Kalula nje, wayengithathe us.
Imvamisa ukuxhumana kwethu nabamele izinsizakalo zamakhasimende kuyaphikisana futhi kugcwaliswa ngemiphumela emibi. Lo mmeli othengisayo ubonakale enendaba ngempela ngesimo sami. Wayefuna ukungibhalisela ngempumelelo okuthile, futhi angenze ngizizwe ngijabule ngakho. Lokhu bekungeyona into encane okwenziwe ngayo. Bengisuka enkonzweni yami yesethelayithi ngiya kwi-TV edijithali esezingeni eliphezulu. Ubengisiza kakhulu ekuchazeni engikukhethayo nasekulaleleni engimtshele khona. Akukaze kube kanye ngenkathi ngishayelwa ucingo ngesaba ukuthi wayengalaleli engikufunayo noma ukuthi ngeke akuhloniphe engikushoyo.
Isifundo sokuqala lapha ukuthi insizakalo yamakhasimende imayelana nokulalela amakhasimende akho, nokuzama ukuhlinzeka (ngokuvumelana) isixazululo senkinga. Lo mmeli uxazulule inkinga yami ngomusa, ngobuhlakani, nangaphansi kwesigamu sehora! Ukube nje bonke abamele izinsizakalo zamakhasimende bebenjena, bengingeke ngishintshe ngisuke ku-Dish Network (whoops!) Ngiye ku-AT & T (whoops double !?).
Isifundo esikhudlwana ukuthi isipiliyoni sami - my umsebenzisi isipiliyoni - nalo mmeleli wamakhasimende athuthukise umbono wami jikelele wenkampani. Yize bengingakaxhumani nomkhiqizo wangempela, ulwazi enginalo ngomsebenzisi seluvele luhle. Khumbula, akunandaba ukuthi umkhiqizo wakho muhle kangakanani - uma ulwazi lokufika kulowo mkhiqizo lubi, abantu ngeke bafune nokuzama.
Tags: Insizakalo yekhasimendeomele inkonzo yamakhasimende
UTravis wazalelwa futhi wakhulela ezweni elikude elibizwa ngeNebraska, futhi ngemuva kokufunda ekolishi eMissouri, waphothula izifundo zakhe ze-MBA neMasters of Social Psychology eBall State University. UTravis ube yizinto eziningi, kufaka phakathi i-cameraman, tutor, disc jockey, underwriting salesman, barista, a tourist nomadic, librarian, sandwich artist, office office, research, research research, HR lackey, and project manager, konke lokhu okumlungiselele ngendima ye-User Experience Analyst. E-Tuitive, uphethe ucwaningo lwabasebenzisi, ukuhlolwa komsebenzisi, ukumodeliswa komsebenzisi, ukuqoqwa kwezidingo, nokugcina umuntu ekwakhiweni okugxilwe ngabantu.
Ukuhlola Izinga Lesiza Sakho ngosesho olwenziwe ngezifiso
Izinhlelo Zokulawulwa Kokubhalisile: CheddarGetter
I-Oscar Del Santo
Dec 21, 2009 ku-9: 41 AM
Ukuvimba amakhasimende ethu kumane nje kuyisidingo, ikakhulukazi kithina sonke esibambe iqhaza ezinkundleni zokuxhumana.